1. Tsoka diki Seizvo zita rinoreva, tafura yekupeta tafura inogona kupetwa. Ichi ndicho chinonyanya kukosha chekugadzira patafura yekupeta. Kana nzvimbo iri mumba mako yakaganhurwa, handiti? Tafura yekupeta yakakunakira iwe, vhura paunenge uchida, peta pausingade ...
Icho chikonzero chekuchangobva kupenga kukwira kwereji yezvifambiso
Tenda kukwira kwakasimba mukutakura zvinhu zvegungwa zvenguva ino kurega maindasitiri mazhinji ane hukama, kwete mitengo chete, uye tangi rakaoma kuwana, kunyangwe kutaura zvisina chinhu kwakanyanya kunetsa, nekuti pamberi pekugadziriswa kwesimba, zvichikonzera kuwanda kwedenderedzwa chinzvimbo hachina kukwana, mu pres ...
Kunze kwemafenicha mabhenji anomhanyisa kumhanya kwedu fekitori dhizaini
Nekudzoreredza kwemacro hupfumi uye kuwedzera kwekupinda kweiyo e-commerce, musika wekunze wefenicha weChina uri kuramba uchizivikanwa. Iyo ichangobva kuburitswa yekutarisisa mushumo weChina kunze kwenyika data Research Center inoratidza kuti muhafu yekutanga yegore rino, iyo transac ...
Kunze kwemitambo zvigadzirwa zvinomhanyisa kumhanya kwegadziriro yeChina
Nekudzoreredza kwemacro hupfumi uye kuwedzera kweyekupinda mwero we e-commerce, China e-commerce yekutengesa musika iri kuramba ichiwedzera kufarirwa. Iyo ichangobva kuburitswa yekutarisa mushumo weChina E-Commerce Research Center inoratidza kuti muhafu yekutanga yegore rino, iyo transact ...